एउटी वृद्धा (कथा) | चितवन पोष्ट
गृह पृष्ठ साहित्य
एउटी वृद्धा (कथा)
कुरा हिजो दिउँसो लगभग १२ बजेतिरको हो । भाइ, ममी र म तीनैजना कोठामा थियौँ । अचानक बाहिर कोही बोलेको चर्को चर्को आवाज मेरो कानमा ठोक्कियो ।
म झसंग भएँ, ‘ओ ! को हो ?’ अटल रहेर कान ठाडा पार्दै बाहिर ध्यान दिएँ । सबैको ध्यान बाहिरको आवाजमा केन्द्रित भयो । बाहिरको त्यो चर्को आवाज ‘किन्ने हो ? किन्ने हो ??’ तोते बोली अलिक अस्पष्ट आवाज चिनेको जस्तो लाग्यो ।
ऊ हो के… ममी बोलाम है ? भन्दै भाइ ढोकातिर दगु¥यो ।
‘ह्या, छोड्दे छोड्दे पर्दैन भो, त्यही बूढी हो के, केही किन्नु छैन’, ममी भो भो भन्दै हुनुहुन्थ्यो । बोला बोला भन्दै म पनि ढोकासम्म पुगेँ ।
ढोकामा पुगेर हेर्दा बाटोमा तिनै कान नसुन्ने तोते बूढी रहिछन् । लेकाली जडीबुटीहरु बेच्न हिँडेकी एकल वृद्धा जो धेरैपटक नै यता आइसकेकी थिइन् । हरेकपटक यता आउँदा मैले जेठीमधु किन्थेँ ।
प्रणय सौन्दर्यको सुन्दर कृति ‘समीर’प्रति दृष्टिप्रक्षेपण (कृति समीक्षा)
भाइले ढोका खोलेर यता यता भन्दै चिच्यायो, तर ती कान नसुन्ने बूढीले सुन्दै सुनिनन् ।
‘किन्ने हो ? किन्ने हो ? के चाहिया छ ?’ भन्दै उनी एउटा घरतिर लागिन् । त्यो घरकी बहिनीले ‘हैन हैन चाहिया छैन’ भन्दै हात हल्लाउँदै थिई । बिचरा बूढी ‘हँ ! हँ ! के चाहियो ? के चाहियो ? के किन्ने ?’ भन्दै गइन् ।
हामी हाँस्यौँ ।
‘नानी यता पठाइदे त’, भाइले त्यो बहिनीलाई भन्यो ।
‘उता किन्ने रे उता’, हामीतिर इसारा गर्दै बहिनीले ती बूढीलाई हाम्रो घरतिर पठाइदिइन् । आवाज तोते र अलि अस्पष्ट सुनिन्थ्यो । म कान सुन्दिनँ भन्दै उनी हामीतिर आइन्, ‘किन्ने हो ? किन्ने हो ? कान थुन्दिनँ, म कान थुन्दिनँ, के ताइयो ?’
किन्नुपर्ने त खासै केही थिएन । वृद्धाको तोते अस्पष्ट बोली र हिँडाइ देखेर हाँसो उठ्यो । हामी हाँसेपछि बूढी ‘हँ ! हँ ! म कान थुन्दिनँ, के ताइयो ?’ भन्दै थिइन् ।
‘उफ्, किन बोलाका होलान् त्यत्तिकै, के किन्ने हो र त्यसै भुलाइदिएर, बिचरा !’ ममीले केही किन्ने चासो देखाउनुभएन ।
‘हैन के ममी, केही त किन्दिम् न’, मैले हातले इसारा गर्दै बूढीलाई बस्न आग्रह गरेँ । बूढी बसेर आफ्नो सामानको पोको फुकाउन थालिन् ।
‘भाइ, ऊ त्यो किनम् न, त्यो के अरे ? तैँले किन्थिस् नि काठजस्तो मीठो हुने के ।’
‘हो, अँ जेठीमधु, जेठीमधु छ ?’
बूढी तोते बोलीमा “देथीमधु ? देथीमधु थ थ ।’
बूढी कपडाका पोका फुकाउँदै जडीबुटी चिनाउँदै विज्ञापन गर्दै थिइन् । भाइ बूढीले ल्याएका जडीबुटी हेर्न थाल्यो ।
मलाई भने पहिले नै थाहा थियो, बूढीसँग यस्ता जडीबुटी छन् भनेर । शिलाजित, पाँचऔँले, निर्मसी, यार्चागुम्बा, हिङ, जिम्मु, जायफल, जेठीमधु, टिमुर, सिलटिमुर, सिदे नुन, बिरे नुन, हर्रोबर्रोको धूलो औषधिहरु यस्तै यस्तै थुप्रै जडीबुटीहरु ल्याउँथिन् ।
यी वृद्धा अरुभन्दा फरक छिन् । समूहमा नहिँडेर एक्लै एक्लै हिँड्ने गर्छिन् । घर कहाँ हो ? भनी सोध्दा ‘जहाँ बस्यो त्यहीँ हो’, एक्लै हो ? साथी कता छन् ? भनी सोध्दा ‘छैन, कोही पनि छैन मेरो, म त एक्लै हो, म त सधैँ एक्लै हो’, भन्थिन् ।
उनको व्यापार नीति पनि अरुको भन्दा फरक छ । आफूले ल्याएका अमूल्य जडीबुटीहरु महँगोमा बेचेर मनग्य नाफा कमाऊँ भन्ने उद्देश्य उनमा छैन । रोगी बिरामीहरुलाई र जडीबुटी आवश्यक परेकाहरुलाई उनीहरुका आवश्यकता पूरा गरिदिनु नै उनको उद्देश्य हो । उनी आफूसँगका अमूल्य जडीबुटीको सुहाउँदो मूल्य तोक्छिन् । कसैले मसँग त्यति पैसा छैन, तर मलाई यो चाहिएको छ भन्यो भने उसको आवश्यकता पूरा गरिदिन नाफा–घाटाको कुनै पर्वाह नै नगरी जति छ त्यतिमा नै दिन्छिन् ।
अघिल्लोपटक आउँदा म अल्लि बिरामी थिएँ । पुसको महिना थियो, रूघाखोकी र चिसोले समातेको थियो ।
‘घाँटी दुखेको छ मेरो । नुनपानी तताएर खानुप¥यो । सिदे नुन दिनू न ।’
बूढीले ‘१० रूप्पे १० रूप्पे’ भन्दै एउटा कागजमा सिदे नुन पोको पारिन् ।
‘जेठीमधु छ ? मलाई जेठीमधु नि चाहिया छ ।’
‘थ थ, देथीमधु थ । यी एउताको दथ रूप्पे हो’, बूढीले जेठीमधु पनि झिकिन् ।
‘मलाई कस्तो पेट दुख्छ, ग्याष्ट्रिक भएको छ के आमै, के खाने होला, पेट दुखेको औषधि छ ?’
‘थ थ, यी यो धूलोले चट्टै हुन्च, तातो पानी साँ खा, बिहान बिहान चट्टै हुन्च’, ८–१० चम्चा धूलो उनले कागजमा पोको पारिन् । उनी ‘१० रूप्पे
१० रूप्पे’ भन्दै थिइन् ।
‘मेरो पेट त धेरै दुख्या छ के, अल्लि धेरै राखिदिनू न यो धूलो, धेरै दिन खान प¥यो ।’
‘धेरै चाहियो ? धेरै चाहियो ? ल ल’ भन्दै २ चम्चा धूलो फेरि थपिन् । ‘ल ल, पुग्च पुग्च, चट्टै हुन्च ।’
मैले २० रूपैयाँको नोट झिकेर दिएँ ।
‘तीथ रूप्पे हो तीथ ।’
‘तीस हो ?’
‘मसँग यत्ति छ, छैन नि तीस त ।’
‘छैन ? छैन ? हो, छैन ?’
‘अहँ छैन, यत्ति हो ।’
बिचरा, मसँग छैन भनेपछि तीसको सामान बीसमा खुरूक्क दिएर गएकी थिइन् ।
त्यति नै बेला एउटा दाइले यार्चागुम्बा छ ? भनी सोधेका थिए ।
‘थ थ, यार्चा थ’ भन्दै उनले यार्चा झिकिन् ।
‘कति हो ?’ दाइले सोधे ।
‘एउटाको चार सय ।’
‘सयमा आउँदैन ?’
‘आउँदेन आउँदेन, चार सय हो चार सय ।’
‘मसँग यत्ति छ, के गर्ने त ! आउँछ होला’, दाइले बार्र्गेिनङ गरे ।
‘आउँदैन, सयमात्रै छ ? आउँदैन, सयमा आउँदैन ।’
‘ऐया, कस्तो जीउ दुख्या छ, बिरामी छु । यार्चागुम्बा चाहिया’थ्यो, आफूसँग सयमात्रै छ’, दाइले बिरामी भएको नाटक गरे ।
‘चाहिया हो ? चाहिया हो ?’, दाइको नाटकले बूढी भावुक भइन् ।
‘अरु छैन ? अरुसँग नि छैन ?’
अरुसँग पैसा भए थपिदिए हुन्थ्यो भन्ने आशयले बूढीले त्यहाँका अरुसँग पैसा छ ? भनेर सोधिन् । सबैले छैन छैन भनिदिए ।
सबैले छैन छैन भनेपछि ‘सानो नि आउँदैन सयमा ?’ भन्दै दाइले थपे ।
‘सानो ? सानो दिम् ?’
बूढीले सानो एउटा छानेर दिएकी थिइन् । बूढी गएपछि हामी सबै हाँसेका थियौँ ।
हामीले त्यो बूढीलाई ठगेका थियौँ । पैसा भईकन पनि छैन भनेर सस्तोमा छोडेर गई भन्दै बूढीलाई उडाएका थियौँ । हामीले ती वृद्धाको सोझोपनको फाइदा उठाएका थियौँ । जानी–जानी हामीले उसको मालको मोल पनि दिएनौँ ।
वास्तवमा ती वृद्धा सोझी होइनन्, खुला र उदार हृदय र सच्चा नेपाली मन भएकी महिला थिइन् । यस्ता मान्छेलाई पाए फाइदा उठाउन जो पनि तयार हुन्छन् ।
पक्कै पनि यिनले हामीलाईजसरी नै अरु कतिलाई पनि सस्तोमा माल बेचेर हिँडेकी छन् । हातखुट्टा र बल छउन्जेल यी वृद्धा जडीबुटी खोज्ने, औषधि बनाउने र यसरी नै बेच्ने अनि बाँड्ने गरेर पेट पाल्थिन् ।
दिन बित्दै जान्छ र उमेर पनि ढल्दै जान्छ । वृद्धा झन् वृद्धा र असक्त हुँदै जान्छिन् । सहारा र साथ दिने साथी कोही छैन । कुनै दिन जडीबुटी संकलन गर्न हिँड्न नसक्ने अवस्था पनि आउला, त्यतिबेला यी वृद्धालाई हेर्ने कोही निक्लेलान् त ?
आफ्नो शरीरमा बल हुँदा कति बिरामीलाई सजिलै औषधि दिएर निको पारेकी यी वृद्धा भोलि आफू असक्त हुँदा उनको भोको पेट भरिदिने उनले कोही भेट्टाउलिन् त ?
(गैँडाकोट ४, नवलपुर)